Amandla okuthiwa u-Eugene sasivumela omuhle ubunjalo lwezikhali yayo waphawula ukuthambekela sibonakalise imvelo okuhle. Ngokuqinisekile ebuntwaneni Eugene ngeke kakhulu esebenzayo, kodwa abathobekileyo futhi akunakwenzeka ukuba. Mhlawumbe lokhu ukulinganisela phakathi enokuthula ukuhamba uzohlala naye impilo yakhe yonke okwalandela.
Yini igama Eugene e ukubonakaliswa Ubumnene? Zonke umsungulo ivumela namanje elithile impulsivity, ikhono nokusabela ezintweni ezahlukene, kodwa, kungenzeka ukuthi, lihambisana namanye ngokuthi ukubonakaliswa ingxube kuzoholela indida. Eugene akuyona othambekele izindlela zobudlova nengxabano, futhi umuntu enezimfanelo ekahle kubonakala intelligence kwangaphakathi kuye. Ngaphezu kwalokho, ngezikhathi ezithile lapho sibonisa ikhono ukuthatha izenzo juqu, ngisho akwazi ukwenza feat, kodwa uzomangala leli qiniso.
Zhenya ukwethula, ubhekene necala elithile ukuvelela, kodwa kukhona usukela ukulinganisela phakathi izinzuzo zezinto ezibonakalayo nezingokomoya isifiso udumo, lapho kukhona isimo esinjalo, imfundo ka okukhulu ukubaluleka. Igama Eugene unesikhundla ukukhetha empilweni, ukuthatha zombili lezi izidingo ku-akhawunti. Emsebenzini, ngeke belwela, kodwa ithuba ukuya phezulu isitebhisi umsebenzi ngeke miss. Asikabi khona isampula ukwakha ibhizinisi lakho, kodwa iningi izinhlelo kulesi siqondiso zisekhona nje iphupho ukuba umuntu ogqoka igama Eugene. Ukubaluleka uqagula kuphela inzuzo sobala.
Ukubudlelwano nge izimfanelo zesifazane eyinhloko zhenya - ukuncokola, sociability futhi ukudlala. Uba lomkhumbi olamandla ongedluli, luziphatha ngokukhalipha futhi ngokuvamile ubukeka angenakuvinjwa emehlweni abesifazane.
Yini enquma izinga umndeni ukuba umuntu Eugene igama? Inani umndeni ungowenani kuye. Kwezinye izimo, Eugene ebukekayo uphatha ukushada ngaphezu kwesikhathi esisodwa, ngenkathi sigcina ubudlelwane okukhulu nabantu ngamunye owayeyintombi yakhe abafazi.
Umbono bangaphandle ngokubukeka kwakhe siqu ebuntwaneni kubaluleke kakhulu kuye. Qamba Eugene evame ukugqokwa ngabantu evuthiwe kwezobuciko. Lo muntu nge charm komuntu ohlakaniphile bangaphumelela umsebenzi futhi ukwakhela lo msebenzi.
Yini igama Eugene ucansi namadoda? Nakuba intukuthelo isilinganiso wakhe, ngikhetha ngokweqile lapho ukhetha umngane womshado. Eugene ivikela ubumsulwa ngobuqotho, aye nayo intombazane. Ngokocansi, kufanele uzizwe nje eqeda ukoma umlingani kanye ngokwami ukuthola ukwaneliseka ngokugcwele, ukubuyisela ngokomzimba futhi ibhalansi engqondo. Yini igama u-Eugene, akuyona njalo kunesidingo ukwazi umkakhe. Uma kwenzeka ukunganeliseki nomkakhe ngokuya obuseduze, ngokuqinisekile ayizange isehlukaniso, kodwa bayofuna induduzo ohlangothini. Lapho ngineminyaka engu-iminyaka engu-40 Jack kwehlisa ibha ekukhetheni abangaki azibandakanya nabo kwezocansi, ucabangela ubulili isidingo begazi futhi engasekho.
Yini igama, Eugene uyazi, uyiqonda kahle yonke ezicashile kanye uyaziqhenya ukuthi abazali bakhe ngokuthi.
Yini ukukhwehlela ukukhuluma?